China auto car conditioner esebenzayo carbon HEPA cabin lokucoca ulwelo air filter mveliso kunye nabenzi | Chuangqi
Isixhobo sokucoca ulwelo seCarbon HEPA sokucoca ulwelo somoya
1. UMGANGATHO OPHAKAMILEYO NENKXASO: evela kwiFektri ye-BIG eyiNtloko; Inkxaso yobugcisa; ukuba awonelisekanga, awunakubuya mngcipheko; Ukusebenza okuphezulu kokucoca umoya
2. UMSEBENZI: Isihluzi somoya esicocekileyo siphucula ukuhamba komoya kwaye sithintela ukungcola nothuli
3.Ukuhambelana: nceda ujonge imodeli kunye neminyaka ukusuka kwimifanekiso, ukuba awuqinisekanga ukuba le yeyona nto ichanekileyo kwimoto yakho nceda usithumelele onke amanani akho kwaye siya kukuvuyela ukukujonga.
Igama Product: Icebo lokucoca ulwelo Air
Inombolo ye-OE OEM Ukusebenza kakuhle 99.99%
Umbala Mnyama MOQ Ii-100pcs
Igama lomxholo Icebo lokucoca ulwelo lomoya Isampulu Iyafumaneka
Indawo yokuzalwa Hebei, China Igama lebrand Isihluzi seConqi
Izinto eziphathekayo Ikhabhoni esebenzayo Isiqinisekiso: I-ISO9001
Ukuxhamla: 5um Icebo lokucoca ulwelo 0.3 micron zi 99.99%
Isicelo: Susa amasuntswana emoyeni angena kule ndlwana.
Ngentando: Umbala, ukusebenza ngokuhluza, i-antibacterial, naziphi na iimfuno zokucoca ulwelo.
Iinkcukacha zokupakisha: Iingxowa polyethylene ngamnye, iibhokisi, okanye ngokweemfuno zabathengi.
Ixesha lokuzisa: Kwiintsuku ezili-15 ukuya ku-30 ​​emva kokuqinisekiswa komyalelo
Iimbonakalo:Gcina wena kunye nosapho lwakho kude nothuli, umungu kunye nomba wokugcina izinto ngokugcina umgangatho womoya ococekileyo kwisithuthi sakho. Inokuvumela amandla okuhamba okuphezulu ngelixa utsala uthuli olucolekileyo, nokwandisa ukuhamba komoya kwindawo yokufudumeza imoto kunye nenkqubo yomoya.
Ukusebenza kweCarbon Layer: Ukusebenza okuphezulu kwelahle yamalahle kunceda ukubamba ukungcola, ukukhupha umsi, kunye neegesi eziyingozi ngokufanelekileyo, ukuphucula ukusebenza kwe-HVAC, ukunciphisa ivumba elidala lemoto kunye nokuqinisekisa umoya ophefumla omtsha.
Ncomela:Uyacetyiswa ukuba utshintshe isihluzo somoya sangaphakathi kwikhabhathi rhoqo ngonyaka okanye zonke iikhilomitha ezili-12,000. Kuya kufuneka uyitshintshe rhoqo emva kweemayile ezingama-5 000 emva kokuqhuba kwiindawo ezingcoliswe kakhulu okanye ukuhamba kwiindlela zomhlaba.
Kulula ukuyifaka:Kukulingana okufanelekileyo kwaye kuya kuthatha imizuzu engaphantsi kwe-10 ukugqiba utshintsho lwefilitha. Kulula ukufunda utolo lokuhamba komoya kwicala lenza kube lula ukufaka.
PHAWULA: Kuya kufuneka uchwetheze unyaka kunye nemodeli yesithuthi onaso ngaphambi kokuba u-odole indawo ukuze wazi ukuba iyakulungela na isithuthi sakho.
Eyilwe ngocoselelo lwamalahle asebenza ngaphakathi kwizixhobo zokuhluza ngokufanelekileyo asuse uthuli kunye nezinto eziqinileyo, ezibabambe kude nengaphakathi lezithuthi apho bengenakuphefumlwa khona. Ukongeza, faka itekhnoloji yecebo lokucoca phambili ukuqinisekisa imeko esempilweni emotweni.
Iziphumo zomoya wekhabhathi ezihlala zihlala zintsha, zimnandi kwaye zisempilweni ukuphefumla.
Igcina ingaphakathi lemoto yakho icocekile kwaye iqinisekisa imeko esempilweni emotweni.
Jonga ukutshintshwa kwesihluzi somoya ukuba ngaba kuvumba ivumba lomphefumlo kwindlela yesithuthi engenisa umoya.
Jonga ukutshintshwa kwesihluzo somoya ukuba izithuthi zokuFudumeza, ukungenisa umoya kunye neMeko yoBume boMoya (HVAC) zibonisa ukusebenza kakubi okanye ukusebenza kakuhle.
1.Ukwamkelwa kwemveliso ye-OEM: Imveliso, iPhakheji
2. Umzekelo wesampula
3. Siza kukuphendula imibuzo yakho ngeeyure ezingama-24.
4. emva kokuthumela, siya kukulandelela iimveliso zakho kube kanye kwiintsuku ezimbini, de ufumane iimveliso. Xa unempahla, zivavanye, kwaye undinike ingxelo ukuba unayo nayiphi na imibuzo
Egqithileyo 88568-0D520 air conditioner anti uthuli lokucoca ulwelo non womluki imoto air lokucoca ulwelo
Okulandelayo: Ihowuliseyili iinxalenye enginge spin kwi oyile lokucoca ulwelo 26300-02503 for Itraki imoto
Isihluzi seToyota Corolla Cabin yango-2004
I-Cabin yoMoya yokuCoca iMoto isiKhanyisi soMoya 80292s6d
I-Cabin Air Filter ecocekileyo
ICarbon isebenze kwiCabin Air Filter Media
Isihluzi seCarbon Air esisebenzayo 87139-0N010